SSM : Lasa mpikarama an’ady -
AccueilRaharaham-pirenenaSSM : Lasa mpikarama an’ady
20/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny efa fantatra, dia misy ambadika politika efa hatrany am-boalohany ny fitakiana nataon’ny fikambanamben’ny sendika eto Madagasikara na ny SSM. Tsy misy fitakiana mari-pototra ho an’ny tombontsoan’ny mpiasa ny azy ireo hatramin’izay fa dia fitakiana fialan’ny mpikambana sasantsasany eo anivon’ny governemanta.
Marihina mantsy, araka ny fandaharam-potoan’izy ireo, fa omaly alakamisy no tokony nanatanterahan’ny SSM ny hetsika “diabe” mitety minisitera sy manao fandrahonana ny mpiasa miasa, toa ny fanaony tamin’ny herinandro lasa. Tsy tanteraka indray anefa izany noho ny antony tsy hay. Rehefa nanontaniana ny mahakasika ny hetsika mantsy ny mpitondra tenenin’izy ireo, ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), Fanirisoa Ernaivo, dia tsotra ny namaliany ny fanontaniana fa miato kely ny hetsika satria mbola tsy amin’ny fotoana hanohizana azy. Ity mpitondra teny ity ihany anefa no nanambara teo aloha teo fa mitohy isan-kerinandro ny hetsika, ary tsy mijanona raha tsy mivaly ny fitakiana amin’ny fanesorana ireo minisitra efa tamin’ilay governemanta Mahafaly Olivier mbola mipetraka ho minisitra ihany amin’izao governemantan’ny marimaritra iraisana izao.
Mazava sy mibaribary, araka izany, ankehitriny, fa lasa mpikarama an’ady ireo lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ity SSM ity. Tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany sy ny an’ireo mpanao politika manosika azy ireo izy ireo. Fa vantany vao namoaka ilay fanambarana fampitandremana amin’ny fanaovana hetsika misy ambadika politika mantsy ny teny anivon’ny Primatiora, avy hatrany dia nangina ireto SSM ireto.
Raha ny marina, dia mifono fitadiavan-tseza ilay fitakiana satria izy ireo ihany, raha ny fanambarany no tokony manolotra olona ho eo amin’ny toeran’ny minisitra amin’ireo minisitera sasantsasany, toa ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany, sns.